शिक्षा अधिकार र उपयोग : RajdhaniDaily.com
विकासविरोधी तत्व मौलाएको भन्दै मौलापुरमा विकासको पक्षमा प्रदर्शन
राजधानी समाचारदाता - June 23, 2021 0
गौर । प्रदेश २ मै विकासको गतिमा सदैब एक कदम अगाडि रहने रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा बुधबार बिशाल जनप्रदर्शन भएको छ । विकास तथा सत्यको लडाईमा...
कविता राईकाे ‘देशको नक्शा’लाई ५० हजार पुरस्कार
काठमाडाैं । राष्ट्रिय कविता महोत्सव २०७८ मा भोजपुरकी कविता राई(देशको नक्शा) प्रथम भएकी छिन् । नेपाल प्रज्ञा –प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित महोत्सवमा धादिङकी अमृता स्मृति द्वितीय(डढेलोपछि...
ईट्टा भट्टामा रहेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर दाजु भाईको मृत्यु
राकेश गुप्ता - June 23, 2021 0
सर्लाही । सर्लाहीमा ईट्टा भट्टामा रहेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर दाजु भाईको मृत्युु भएको छ। बुधवार मलंगवा न.पा.११ स्थितमा रहेको जंगीलाल रायको ईट्टा भट्टामा...
घरमा सुतिरहेकाे बेला आएको पहिरामा पुरिएर तीनको मृत्यु
राेल्पा । अविरल वर्षापछि गएको पहिरामा परी रोल्पा नगरपालिका–९ लिउनमा तीनजनाको ज्यान गएको छ । घरमा सुतिरहेको अवस्थामा घरमाथिबाट आएको पहिरामा पुरिएर उनीहरुको मृत्यु...
घर आउँदै गरेकी किशोरीलाई लछारपछार पारी बलात्कार गर्ने पक्राउ
दल्लु । जबर्जस्ती बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार बलात्कार गरेको आरोपमा गुराँस गाउँपालिका–३ का ३६ वर्षीय भद्रबहादुर बुढालाई...
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेतासँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । पछिल्लो पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट नेताहरुसँग छलफल गर्दैछन् । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न...
अब पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकार पाँच सदस्यमा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम...
देश गम्भीर संकटतर्फः पाँच दल
महेश्वर गौतम - June 23, 2021 0
काठमाडौं । विपक्षी गठवन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले सरकारको स्वेच्छाचारिताका कारण देश गम्भीर संकटतर्फ अग्रसर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र...
घरमा पालेकाे कुकुरलाई झुण्ड्याएर हत्या गर्नेमाथि कानूनी कारबाही गर्न माग
काठमाडौं । सुर्खेतमा कुकुरको पाश्विक हत्या गर्ने व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही गर्न पशु अधिकारकर्मीले नेपाल प्रहरीसमक्ष माग गरेका छन् । एनीमल नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष प्रमदा शाह,...
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एक अर्बको क्षति, वर्षा नसकिउन्जेल पानी नआउने
काठमाडाैं । निरन्तर वर्षापछि गएको पहिराले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा र एक अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ । आयोजनाका मुख्य संरचना सुरुङ र...
चुडामणी शर्मासहित महत र ढकाल विरुद्ध एक अर्बको भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा
काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछर्याेट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचारका अभियोगमा मुद्दा दायर...
२४२१ मा काेराेना संक्रमण पुष्टि ५२ जनाकाे मृत्यु
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा २४२१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ७४६१ पीसीआर परीक्षणमा १५११ र...
प्रारम्भिक छनोटमा ५० खेलाडी
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले आसन्न साफ च्याम्पियनसिप र एएफसी एसियन कप छनोटको अन्तिम राउन्डका लागि ५० सदस्यीय प्रारम्भिक...
इग्ल्यान्ड, क्रोसिया र चेक रिपब्लिक नकआउट चरणमा
एजेन्सी - June 23, 2021 0
लन्डन । समूह 'डी' बाट इंग्ल्याण्ड, क्रोएसिया र चेक रिपब्लिक युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा पुगेका छन् । समूह चरणको अन्तिम खेलमा चेक रिपब्लिकलाई १–०...
प्राविधिक काम गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा
स्मृति रेग्मी - June 23, 2021 0
कुनै पनि नसोचेको घटनाबाट पहिल्यै सतर्क भएर बाँच्ने अवस्थालाई सुरक्षा भनिन्छ । सुरक्षित हुनलाई हामीले विभिन्न कुरामा पहिल्यै विचार गरेर कार्य गर्नुपर्छ । त्यसैले...
राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान
श्रीप्रसाद प्रसाई - June 23, 2021 0
विपन्न मात्र होइन, समृद्धशाली राष्ट्रको पनि आफ्नै समस्या हुन्छन् । विश्वमा त्यस्तो कुनै मुलुक छैन जो समस्यामुक्त छ । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा यत्रतत्र सर्वत्र...
चुस्त प्रशासन जरुरी
निर्वाचनका लागि सरकारले गर्ने विभिन्न तयारीहरूमध्ये प्रशासनिक तयारी सबैभन्दा महŒवपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यकारी भूमिका मूलतह प्रशासन संयन्त्रको रहन्छ ।...
Home बिचार शिक्षा अधिकार र उपयोग
शिक्षा अधिकार र उपयोग
हरेक व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता भनिन्छ । तर, वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने मात्र नभई अन्य वस्तु तथा सेवाका उत्पादन आपूर्तिकर्ता तथा बिक्रेतासमेत उपभोक्ता हुन सक्छन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धार ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले उपभोक्तालाई बजारमा प्राप्त हुने वस्तु तथा सेवा तथा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा समूह भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन दफा २ क ले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हो भनेर परिभाषित गरिएको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा बजारमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु प्राप्त गर्नु भनेको कठिन कार्य बनेको छ किनभने हरेकजसो उपभोग्य वस्तुमा मिसावाट मिति सकिएको र गुणस्तरहीन हुने गर्छन् ।
एकातर्फ हाम्रा उपभोक्ताहरूमा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने सम्बन्धमा ज्ञान नभएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ व्यापारी तथा उत्पादकहरू भने जसरी हुन्छ बढी नाफा कमाउने एक मात्र उदेश्यमा केन्द्रित हुने प्रवृृत्तिले अरू उपभोक्ता ठगिने गरेको छन् । उपभोक्तामा कुनै पनि उपभोग्य वस्तु कहिले उत्पादन भएको हो ? कहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ? त्यसको मूल्य कति हो ? जस्ता विषयमा चासो राख्दैनन् । शिक्षित जान्ने बुझ्नेले पनि ख्याल गर्देनन् भने अर्का ठूलो जमात त्यसप्रति अनविज्ञ नै हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिकै कारण व्यापारी तथा उत्पादकले उपभोक्तासँग सजिलै पर्याप्त नाफा लिने अनि उपभोक्ता सहज रूपले ठगिने गरेका छन् । हाम्रा अधिकांश व्यापारीमा व्यापारिक धर्र्म नै देखिँदैन । किनभने आफ्नो परल वा लागत मूल्यमा सामान्यतया बढीमा १० प्रतिशत मात्रा नाफा राखेर कुनै पनि वस्तुको बिक्री गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता हेरेर शतप्रतिशतभन्दा पनि बढीसम्म मूल्य राखेर उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण गरिरहेको छन् ।
व्यापारी तथा उत्पादकले गर्ने गैरकानुनी कार्यबारे थाहा पाउन उपभोक्ता स्वयं चनाखो शिक्षित र सचेत हुनुपर्छ
व्यापारीहरूले उपभोग्य वस्तुमा मिसावट गर्नका लागि अनेकौ उत्पादन अपनाउने गर्छन् । जस्तै ः मासको गेडामा मासजस्तै देखिने मसिना काला ढुंगाका टुक्रा मिसाउने, घिउमा पिडालु, चिनीमा मैदा, महँगो चामलमा उस्तै प्रकृतिका सस्तो चामल मिसाई बिक्री वितरण गर्छन् । यित केही प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हुन् यस्ता अनगिन्ती बदमासी हुने गर्दन् । हामी परनिर्भर बन्दै गइरहेको छांै । कृषिप्रधान देशमा अन्नबाली उत्पादन पनि गर्न नसकी अर्बौं रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गर्छौं । एउटा सामान्य उदाहरण लाई हेरांै प्याजबिना भान्छामा तरकारी नपाक्ने होइन तर त्यही प्याज २ सय प्रतिकेजी हुँदा पनि नखाइनहुने हुँदै गएका छौं । छिमेकी देशले प्याज बिक्रीमा रोक लगाउँदा रातारात ५० रूपैयाँबाट २ सय नेपालमा बजार भाउ पुग्छ तर आफ्नो जमिन बाँभmो भएर हामीलाई गिज्याउँदै रहेको छ ।
राज्यले कृषिप्रति युवालाई आकर्षित गर्न नसक्दा हामी सामान्य वस्तुमा पनि परनिर्भर बन्दै छांै । राज्यले उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था पनि गरेको देखिन्छ । तर, त्यसले अपेक्षित र प्रभावकारी रूपले कार्य गर्न नसक्दा अरू उपाभोक्ता ठगिने र गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् । वाणिज्य विभाग गुणस्तर तथा नापतौल विभाग जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता राज्यबाट संरचित संस्थाले उपभोक्ता हितमा कार्य गर्न सकेको देखिँदैन । उपत्यकामा मात्रै १२ हजार ट्याक्सी गुड्ने गर्छन् तर अपवादबाहेक कुनै पनि ट्याक्सी मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैनन् । मिटरमा नजाने ट्याक्सी चालकलाई तुरुन्तै कारबाहीको प्रक्रियामा पुग्न सम्भव नदेखी बाध्य भएर चालककै माग पूरा गर्दै यात्रा गर्छ ।
अनेकांै चरण पार गरेर सामान्य कारबाही त होला तर कारबाही गर्छ हामीले आफ्नो पेसागत धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने सबैले मिटरमा नै ट्याक्सी चलाउथे होला । कम्तीमा अनुभूति उपभोक्ताले गर्न सक्यो भने पो त्यसले कार्य गरेको ठहरिन्छ होइन भने त्यसको के औचित्य रहन्छ र उपभोक्ताकै हितका कार्य गर्ने भनेर गठन गरिएका संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता अधिकारका लागि आवाज उठाउने संगठन पनि नभएका भने होइन ।
तर, त्यस्ता संस्थाले उपभोक्ताको हितका कार्य गर्नेभन्दा पनि राजनीति गर्ने प्लेटफर्म मात्र बनाएको जस्तो देखिन्छ । उपभोक्ता स्वयं सचेत भएर बढी मूल्य लिएमा प्रतिवाद गर्ने सम्बन्धित निकायमा सूचना पु¥याउनेजस्ता कार्य पनि गर्नुपर्ने भएको छ । उपभोक्ता बढी चनाखो भएर संगठित भएमा ठगी गर्ने व्यापारीको मनोबल घटन सक्छ । उपभोक्ता अधिकार भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ । उपभोक्ताको हकहित सम्बन्धी कानुन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको हो । सन् १९६२ मार्च १५ बाट थालनी भएकाले हरेक वर्ष मार्च १५ लाई नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५५ ले उपभोक्ता लाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाका मूल्य गुण परिणाम शुद्धता आदिबारे सुसूचित हुने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वस्तु गुणस्तररहित लागेमा उपभोक्तावादी संथार्माफत वा उपभोक्ता आफंैले पनि उजुरी दिन सकिन्छ । उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको नाम ठेगाना दर्ता नम्बर उत्पादित वस्तुको मूल्य सबन्धित वस्तुमा भएको अन्य मिश्रण तौल उपभोग गर्ने तरिका सो वस्तुको उपभोग गर्दा पर्ने प्रभावलगायतका विषयमा उपभोक्तालाई प्रस्ट रूपले जानकारी हुनेगरी उपभोग्य वस्तुको प्याकेटमा समावेश गर्र्र्र्नुपर्छ ।
व्यापारी तथा उत्पादकले गर्ने गैरकानुनी कार्यबारे थाहा पाउन उपभोक्ता स्वयं चनाखो शिक्षित र सचेत हुनुपर्छ ताकि व्यापारीबाट ठगिन नसकौं । हामी सबै उपभोक्ताले उपयोगी शिक्षाका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता शिक्षालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दै गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तु तथा चर्काे मूल्यबाट जोगिन असल उपभोक्ता बनौं ।
उपत्यकाका नौ प्रहरी वृत्तमा नयाँ प्रमुख
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाका ९ प्रहरी वृत्तमा नयाँ प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उपत्यकाका नयाँ प्रहरी प्रमुखमा ढुण्डिराज न्यौपाने बौद्ध, दुर्गाप्रसाद दाहाल लैनचौर,...
अन्तर्राष्ट्रिय धादिङ समाजद्धारा स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
धादिङ । अन्तर्राष्ट्रिय धादिङ समाजको संयोजनमा जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक कोभिड प्रतिकार्य स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणहरु बुधबार एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरिएको छ...
निषेधाज्ञाले मात्रै घटदैन संक्रमण
उपत्यकालगायतका प्रमुख प्रभावित सहरमा निषेधाज्ञा लगाइएको चार साता नाघिसक्दा देशभर निषेधाज्ञा छ । तथापि, संक्रमित र मृत्यृको संख्या ओर्लिन उल्लेखनीय सुरु गरेको छैन ।...
पत्रकारहरुका लागि न्युरोडका यूवा व्यवसायीद्धारा खाद्यान्न सहयोग
काठमाडौं । काठमाडौंको न्यूरोडमा व्यवसाय गर्दै आएका युवा व्यवसायीहरुले कोरोना महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका पत्रकारहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका छन् । युवा व्यवसायी रबी अग्रवाल, सागर...
यसपालि जाडोको मौसम : औसतभन्दा कम छ चिसोको प्रभाव
काठमाडौँ । मुलुकमा यसपालि जाडो याममा चिसोको प्रभाव औषतभन्दा कम रहेको छ । गत वर्ष मुलुकका पहाडी क्षेत्रका केही उच्च भेगमा हिमपात भएको थियो...
रोल्पाका बालबालिकाहरुको हितका लागि राम्रो प्रयास भएकोछ :सामाजिक विकास मन्त्री बराल
प्रदेश Prem Shyangtan - February 20, 2020 0
बुटवल ।सामाजिक विकास मन्त्रालय र रोल्पा जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग बालश्रम न्यूनीकरण तथा सञ्चालित परियोजनाहरूको सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रम प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री...
अर्थ राजधानी समाचारदाता - April 20, 2021 0
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही वैशाख २७ गतेदेखि कतारी रियालको कारोवार बन्द हुने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै...
विश्वमै फैलिँदै कोरोनाको त्रास
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - February 29, 2020 0
काठमाडौँ । वैज्ञानिकहरुले कोभिड–१९ नाम दिएको नयाँ कोरोना भाइरसबाट विश्वमा शुक्रबार मध्यान्नसम्ममा दुई हजार ८७३ व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार आएको छ । विश्व स्वास्थ्य...
हिमपात हुँदा जनजीवन कष्टकर, किसान खुशी
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - February 5, 2021 0
बाजुरा । बाजुरामा बिहीबार रातिदेखि हिमपात शुरु भएको छ । भारी हिमपातसंगै अत्याधिक चिसो बढेकाले यहाँको जनजीवन कष्टकर भएको छ । बाक्लो हिमपातका कारण...
धनुषामा प्रहरी कार्यालयभित्रै एक जना झुन्डिए, एक जनाको गोली हानी हत्या
प्रदेश Roshan Shrestha - June 10, 2020 0
जनकपुरधाम । धनुषाको सबैलामा फरक फरक घटना भएका कारण तनाव उत्पन्न भएको छ । घटनाबाट आक्रोशित बनेका स्थानीयबासीले प्रहरी चौकीमा ढूंगामुढा समेत गरेका छन...
घरमा ताला लगाएर यार्सा टिप्न लेकतीर
भर्खरै Dhruba Lamsal - June 26, 2020 0
बझाङ । बझाङ जिल्लामा प्रशासनले यार्सा संकलन गर्न रोक लगाएपनि लुकि छिपी यार्सा संकलन गर्न जानेहरु गाउँ छाड्दैछन् । जिल्लाको सुर्मा गाँउपालिका लगायत अन्य स्थानीय...
‘नेपालले चीनको पक्ष लिइरहेको भन्ने बुझाइ गलत’
Exclusive Kumar Raut - January 12, 2021 0
काठमाडौं । भारतमा पछिल्लो समय नेपालले चीनको पक्ष लिइरहेको भन्ने बुझाइ गलत रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । भारतीय टेलिभिजन जी न्युजसँग...
राष्ट्रियसभामा दोहोरी : ललिता निवास र अडियो प्रकरणको छानबिन माग
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - February 27, 2020 0
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच सरकारको कामका विषयलाई लिएर दोहोरी चलेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)...
सिन्धुलीमा संक्रमणले महिलाको मृत्यु
प्रदेश ३ Kumar Raut - November 2, 2020 0
सिन्धुली । कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाईरसका कारण सिन्धुलीमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । आइतबार साँझ उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।...
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक धुम्बाराहीमा सुरु, प्रधानमन्त्री ओली नआउने
Breaking News Dhruba Lamsal - December 6, 2020 0
काठमाडौं । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा भने ओली बैठकमा सहभागी नहुने...
अशक्त बालबालिकाको हेरविचार सरकारले गर्नेछ : प्रधानमन्त्री
फेरी बढ्यो इन्धनको मुल्य, पेट्रोल प्रतिलिटर १२७ रुपैयाँ
राजधानी समाचारदाता - June 23, 2021
४० हजार घुससहित वन अधिकृत पक्राउ
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ८ जना सम्पर्कविहीन